कसरी फैलियो कुलमानलाई पुनः नियुक्त गरेको ‘फेक’ खबर ? यस्तो छ भित्रि रहस्य – Rapti Khabar
भदौ ९, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने दबाबमूलक अभियान समाजिक सञ्जालमा अहिले चलिहरको छ।
यही दबाबकाबीच मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा एक्कासी एउटा खबर व्यापक फैलिरहेको छ- विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय। धेरैले कुलमानको पुनः नियुक्ति भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिए भने कतिपयले उनलाई नियुक्त गरेकोमा सरकारलाई पनि धन्यवाद दिइरहेका छन्।
यसरी समाजिक सञ्जालमा बधाईसहित स्टाटस राख्नेहरुमा सर्वसाधारणमात्रै होइनन्, धेरैजसो कलाकार पनि अगाडि देखिएका छन्। तर, हल्ला फैलिएजस्तो कुलमानको नियुक्तिको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा बाहिर आएको छैन।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङको पुनःनियुक्तिबारे कुनै प्रस्ताव लगिएको छैन। ‘मैले पनि यो हल्ला सुनिरहेको छु। तर, मन्त्रालयबाट त्यस्तो कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको छैन,’ उनले सूत्रन्युजसँग भने।
त्यसो त कुलमानलाई पुनः नियुक्त गनुपर्ने सामाजिक सञ्जालको दबाबमूलक अभियानमा कलाकारहरुसमेत बिहानैदेखि लागिपरेका थिए। कलाकारहरु करिष्मा मानन्धर, मनोज गजुरेल, स्वस्तिमा खड्कालगायत धेरै कलाकारले कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा निरन्तरताको माग गर्दै स्टाटस लेखेका थिए।
बिहानदेखि दबाबमूलक अभियान चलिरहेका बेला साँझ एक्कासी कुलमान नियुक्तिको झुठो हल्ला कसरी फैलियो त? खोज्दै जाँदा तथ्य यस्तो रहेछ।
सबैलाई झुक्याएको स्टाटस
बाहिर हल्ला भएजस्तै मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो। त्यो बैठक बस्नुभन्दा करिब एक घण्टा अगाडि कलाकार दीपकराज गिरीले ‘आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङलाई नै विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख पदमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ’ भन्ने स्टाटस फेसबुकमा राखे।
गिरीले आफ्नो स्टाटसको अन्तिममा नै यो सत्य होइन भन्ने आशयसहित लेखेका थिए, ‘सरकारसँग यस्तै आशयको समाचार प्रेसित गरेर जनताकै पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन…।’
गिरीको आशय नबुझेर धेरै झुक्किए। करिब ५ सयभन्दा धेरैपल्ट यो स्टाटस सेयर भयो। धेरैले दीपकको पछिल्लो वाक्य ख्याल गरेनन्, अघिल्लो वाक्यकै आधारमा उनका प्रशंसकहरुले बधाई दिन थाले। हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषदले साँच्चिनै निर्णय गरेको ठानेर कलाकारहरु धिरेन शाक्य, सिताराम कट्टेल, बुद्धि तामाङ, रमिला न्यौपानेलगायत धेरैले समेत कुलमान नियुक्त भएको भन्दै बधाई दिए।
स्वभाविकरुपमा कलाकारका प्रशंसक अथवा फलोअर्स बढी हुन्छन्। उनीहरुलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्छन्। कुनै पनि कुरा उनीहरुमार्फत् छिटो फैलने सम्भावना पनि हुन्छ। कुलमानका हकमा पनि यही भइदियो।सामाजिक सञ्जालमा धेरै ‘फ्लोवर्स’ भएका कलाकारहरुले नै यस्तो लेखेपछि अरुले पनि उनीहरुको कुरा पत्याए र बधाई दिए। यो झुटो खबर ‘बिजुली’झैँ फैलिएपछि पुनः कलाकार गिरीले लेखे, ‘केही साथीहरू झुक्किरहनुभएको छ। यस्तै निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ भनिएको छ, निर्णय भएको छैन। तर केही छैन्, तपाईँहरूको यो चासोले थप दबा सिर्जना गर्नमा मद्दत पुग्नेछ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गतेबाट सकिदैछ । उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनलाई फेरि प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दै सामाजिक संजालमा आवाज उठ्न थालेको छ ।
यो बहसमा नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुले पनि साथ दिन थालेका छन् । कलाकार हरिवंश आचार्य लेख्छन्–‘यो देशमा अन्धकार ल्याउनेहरु धेरै छन्, तिनीहरुलाई खोजी खोजी हटाउनुपर्छ । उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौं । कुलमानको उर्जाले देशको उर्जा बढ्छ ।’ हरिवंशले कुलमानको तस्वीर पोष्ट गर्दै यो स्टाटस कोरेका हुन् ।
नायिका करिश्मा मानन्धरले त कुलमान घिसिङ फेरि विद्युत प्राधिकरणमा चाहिने उल्लेख गरेकी छिन् । करिश्मा लेख्छिन्–‘थोरै आफ्नो सोचेर धेरै अरुको लागि गर्ने मान्छे कमै हुन्छन् । कुलमान घिसिङ फेरि चाहिन्छ ।’
गायक शिव परियारले पनि पुनः एकपटक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरण हाकेको हेर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख्छन्–‘म व्यक्तिगत रुपमा कुलमान घिसिङ्ले पुनः एकपटक विद्युत प्राधिकरणको हाकिम हुनु पर्दछ भनेर नेपाल सरकारसँग एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा जोडदार माग गर्दछु । अहिले देशलाई, अहिले मात्र हैन सधैभरि देशलाई उज्यालो चाहिएको छ । अब, नेपाल सरकारको निर्णय कुरेको छु हेरौं । आशा छ, उज्यालो प्रेमी हामी जस्ता तमाम नेपाली जनताको भावनाको नेपाल सरकारले सम्मान गर्नेछ ।’
यस्तै, नायिका वर्षा राउतले कुलमानको तस्वीर पोष्ट गर्दै कलाकार हरिवंश आचार्यको पोष्ट शेयर गर्दै कुलमानको समर्थन गरेकी छिन् ।
सामाजिक संजालमा कुलमान फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा सेलिब्रिटीले समेत यसमा समर्थन जनाउन थालेका छन् ।
उपत्यकामा थप ६७६ जनामा संक्रमण पुष्टि, कुन जिल्लामा कति थपिए ? [हेर्नुस विवरण]
Posted on September 15, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ ३०, काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ६७६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये काठमाडौंमा मात्रै ५५५ जना रहेका छन् भने भक्तपुरमा ८६ र ललितपुरमा ३५ जना रहेका छन् । मंगलबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा सो जानकारी गराइएको हो । पछिल्लो समय उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै संक्रमित […]
सिन्धु गौतम पोखरेल कोरोना संक्रमित देशहरु मध्येमा भारत अहिले विश्वको दोश्रो नम्बरमा परेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण देखिएको सुरुआती दिनदेखि नै राजधानी दिल्ली कोरोनाबाट अति नै प्रभावित बन्यो। कोरोनाको कहर सय, हजार, लाख अनि यति लाख पार भन्दै संचार माध्यमले बताईरहँदा नेपालमा परिवार, आफन्तजन, शुभचिन्तकहरुले चिन्ता जाहेर गर्दा भारतको नयाँ दिल्लीमा बसोबास गर्दै आएको मेरो […]
आज २०७७ भदौ २३ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले […]
नेपालमा योभन्दा खराब अवस्था आउन सक्छ: डब्ल्यूएचओ
भदौ १६ देखि हुने नियमित उडानको तालिका निस्कियो, ६० वटा नियमित उडान हुँदै